Ikhosi eyiyo yoCwangciso lweNdawo- iGeofumadas
Inkqubo Efanelekileyo Yomhlaba
NgoSeptemba, 2009 Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
I-Bolivia Centre yeZifundo eziManyeneyo (i-CEBEM) kunye neZiko leeNyuvesi ze-University of Sanveron (CESU-UMSS) zivakalisa i-8va. Inkcazelo yale khosi yokuqala kwiCandelo loPhuhliso lweeNdawo, elijoliswe kubaqeqeshi beendawo zonke kunye nabantu abanomdla wokwazi, ukujulisa, ukuhlalutya nokutshintshiselwa imilinganiselo kwendima yokulawulwa kommandla njengento ekukhuthazeni uphuhliso.
I-Territorial Organisation iye yahlala iminyaka engaphezu kweyishumi, into ekuqwalaselwe ngabaphandi, amaziko kunye noorhulumente, kunye nento ezuze ukubeka indawo njengesixhobo esibalulekileyo kwikhonkethi yamathuba okuguqulwa kwezakhiwo zentlalo nezopolitiko zamazwe aseMelika. I-Latin America, ngokukodwa ngokubhekiselele kumacandelo asekuhlaleni.
Iyunithi ye1: Umvelaphi kunye nokubaluleka koCwangciso loMhlaba
Iyunithi ye2: Iingcamango Zengqiqo zoCwangciso loMhlaba
Iyunithi ye3: ISifundo seNkundla: Ulawulo loMhlaba eBolivia
Iiveki ze-7 eziquka iveki yokuqala yokulawula i-campus ebonakalayo, ukuqala nge-12 Oktobha ye-2009.
Kukho inani elincinci leengcali.
I-Consultas: Beatriz Herrera
Vula ukubhalisa kwangaphambili
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Wpdesigner, i-WordPress iingcebiso
Post Next ... uphi mfondini ...Okulandelayo »
Impendulo eNye kwi "Khosi eyiyo yoCwangciso lweNdawo"
URicardo Gutierrez M. uthi:
Ndifuna ukwazi iindleko zenkalo yokulawulwa kommandla.
Ikhosi yeArcGIS Pro kunye neQGIS 3 - malunga nemisebenzi efanayo
Funda nge-GIS usebenzisa zombini iinkqubo, kunye nemodeli yedatha efanayo Isilumkiso Ikhosi ye-QGIS yenziwa okokuqala eSpain, ...